China Fumaric Acid emepụta na ndị na -eweta ya Bohua
Mọnde - Satọde n'elekere 9:00 ụtụtụ ruo 6:00 mgbede
Ndị na -achịkwa acid
Ihe mgbakwunye ndị ọzọ
Nchekwa na Antioxidants
Ndị na -atọ ụtọ
Chemical Chemical Ugbo Mmiri
Chemicals nke igwu mmiri
Chemical Ọgwụ mmiri
Ndewo, bịa ka ị gakwuru ngwaahịa anyị!
CAS Mba: 110-17-8
Aha ndị ọzọ: Acid Fumaric
Ịdị ọcha: 99.5
Adị: Ndụ afọ 2
Nchekwa: Echekwara ya site na ìhè, akọrọ na ebe dị jụụ
Fumaric acid, nke a makwaara dị ka acid fumaric, acid fumaric, purpuric acid ma ọ bụ acid lichenic, bụ kristal na -enweghị agba, na -ere ọkụ, carboxylic acid sitere na butene. Fumaric acid na -atọ ụtọ dị ka mkpụrụ osisi, enwere ike ịchọta ya na Corydalis, Boletus, Lichen na agwa mmiri Icelandic.
Nkwakọ ngwaahịa: 1kg/akpa, 25kgs/drum (akpa plastik abụọ n'ime na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ ihe onye ahịa chọrọ.)
Nchekwa: Chekwaa na igbe siri ike, na-eguzogide ọkụ, zere ikpughe ìhè anyanwụ, iru mmiri na oke ọkụ.
Ndụ shelf: ọnwa 24.
Anyị nwekwara ike ịnye akpa ahaziri dịka ihe onye ahịa chọrọ si dị
Oke ibu: 23mts/20'FCL (na -enweghị pallet)
Nlele: 1.22cbm/mt 28cbm/20'FCL
Oge nnyefe: n'ime ụbọchị 10 ~ 20 mgbe ị natasịrị ụgwọ ndị ahịa na LC mbụ.
1) Enwere ike iji acid fumaric dị ka ihe na -eme ka mmiri jupụta.
2) Fumaric acid nwere ọrụ bacteriostatic na antiseptik. 3) Enwere ike iji Fumaric acid dị ka onye na-ahazi acidity, acidifier, thermal-oxidative iguzogide inyeaka, na-agwọ ngwa ngwa na ose.
4) Enwere ike iji Fumaric acid dị ka ihe acidic nke onye na -ahụ maka ihe ọkụkụ, ọ nwere ike mepụta afụ ogologo na ọmarịcha.
5) Enwere ike iji Fumaric acid dị ka onye na -ere ọgwụ n'etiti na onye na -ahụ maka ịcha ọbara.
6) A na -ejikwa Fumaric acid na -emepụta resin polyester na -adịghị edozi ahụ.
7) N'ime ụlọ ọrụ ọgwụ, a na -eji ya emepụta alexipharmic sodium dimercaptosuccinate na ferrous fumarate.
(1) N'ime ụlọ ọrụ nri: enwere ike iji ya rụọ ọrụ na nhazi ihe ọ beụ ,ụ, mmanya ogbugbu, ihe ọ fruitụ fruitụ mkpụrụ osisi na imepụta swiiti na jam wdg Ọ nwekwara mmetụta nke mgbochi nje na antisepsis ma nwee ike wepu tartrate n'oge ị na -eme mmanya.
(2) N'ime ụlọ ọrụ ụtaba: ihe na -emepụta malic acid (dịka esters) nwere ike melite isi ụtaba.
(3) Na ụlọ ọrụ ọgwụ: troches na sirop agwakọtara na malic acid nwere ụtọ mkpụrụ osisi ma nwee ike ime ka mmịpụta ya na mgbasa ya n'ime ahụ.
(4) Industrylọ ọrụ kemịkalụ kwa ụbọchị: dị ka ezigbo onye na -agbagwoju anya, enwere ike iji ya maka usoro nhicha eze, usoro ihe eji esi nri na ihe ndị ọzọ. Enwere ike iji ya dị ka ihe nsị na ihe nhicha. Dị ka ihe mgbakwunye nri, malic acid bụ ihe nri dị mkpa na ntinye nri anyị.
IHE Nkọwapụta MERE
ỌPỤTARA Ntụ ntụ dị mma ỌTỤTỤ
KWURU (NA NKWUKWU NKE) 99.5 --- 100.5% 99.93%
ARSENIC (Dị ka) PP1PPM <1PPM
Duru PP2PPM <2PPM
ANYỊ NA NGỌỌ 0.05% 0.021%
MMIRI 0.5% 0.19%
Agba (Pt-Co) #15# 12#
AKAMKỌ MALEIC 0.1% 0.022%
IHE NA -ABỤỌ 286 ~ 302 Celsius 298 Celsius
IJU 0.01% 0.005%
IHE INDEX MERE
KWURU ≥99.0% 99.55%
Ntupu Site na 300 MESH 100%
ARSENIC (Dị ka) PP3PPM <1PPM
AKUKO EKPERE (Pb) PP10PPM <5PPM
ANYỊ NA NGỌỌ 0.1% 0.027%
MMIRI ≤0.3% 0.19%
Agba (Pt-Co) ≤15 Hazen 12 Eziokwu
DSS. ≤0.3% 0.29%
IHE NA -ABỤỌ 286 ~ 289 Celsius 289 Celsius
NSOGBU (25 Celsius C) ≥1.00g/100ml mmiri Mmiri 1.03g/100ml
Ngosipụta onyonyo ngwaahịa
Ngosipụta ihe nrụpụta ụlọ ọrụ
Ngosipụta ihe onyonyo
Nke gara aga: DL-Malic Acid bụ otu ihe dị mkpa
Osote: Onye na -achịkwa Acidity BP98 Grade Crystalline Powder 99%min Sodium Citrate
Ọkwa nri Fumaric Acid
Osisi Fumaric Acid
Ọnụ Ahịa Fumaric
Onye na -eweta Fumaric Acid
Ụlọ ọrụ Shandong Bohua Chemical Co., Ltd.
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị, biko hapụ anyị email gị wee kpọtụrụ anyị 24hours guzoro na-eche gị.